App.Xiaomi.Com Tiktok Tafatiraha Apk Download For Android
Dukaanka Sare ee Qiimeysan ee Android Store
Apps Homepage Bulshada
»App.Xiaomi.Com Tiktok Tafatiraha Apk Download For Android
TikTok waa laga mamnuucay wadamo kala duwan waxaanan aragnay dhibaatadan waxaan u soo qaadanay dalab cusub oo android ah kaasoo ka duwan TikTok magaca appkuna waa App.Xiaomi.Com Tiktok Editor. Illaa iyo hada tani waa tan ugu wanaagsan ee Apk ee ay soo bandhigaan horumariyayaashu.
Maalmahan TikTok ayaa ah kuwa ugu xiisaha badan ee Warbaahinta Social Media App ka dhex adeegsadayaasha adeegsadayaasha android kaas oo la heli karo si looga soo dejiyo Google Play Store. Waxay caan ku tahay dhallinta qaangaarka ah sababtuna tahay kororka ay caan ku tahay hadda dadka waaweyn ayaa sidoo kale u isticmaalaya madadaalo si ay ula falgalaan asxaabtooda iyo xubnaha qoyska.
Laakiin sababao gaar ah awgood, TikTok waa laga mamnuucay wadamo kala duwan sida Hindiya, Saudi Arabia iyo UAE iwm
Waxaa ka badan Tusahan Xiaomi Tiktok. Apk wuxuu ka kooban yahay qaabab isku mid ah oo ku jira gudaha TikTok laakiin waxay ku darsadeen miiskaan cusub gudaha loo yaqaan 'Social Media Counter'. Laga soo bilaabo halka ay daawadayaashu si toos ah ula wadaagi karaan fiidiyowga fiidiyowga ee ku saabsan Kulamada Warbaahinta Bulshada ee kala duwan.
Barta Tooska Tooska ah waxay daawadayaasha u sahlaysaa daawadayaasha inay soo degsadaan fiidiyowga ugu xiisaha badan gudaha taleefannadooda casriga ah. Hadduu isagu / iyadu rabaan inay abuuraan xog halkaas oo ay ku keydin karaan, wadaagi karaan oo xitaa ka daawan karaan fiidiyaha waqtiyada firaaqada ah.
Waa maxay App.Xiaomi.Com Tiktok Editor
Sifooyinka Muhiimka ah ee App-ka
Sida loo soo dejiyo loona rakibo App
Waa codsi android ah oo si gaar ah diiradda loogu saarayo adeegsadahan isticmaalayaasha android ee aan marin u laheyn TikTok oo si joogto ah looga mamnuucay gudaha waddankooda. Soo dejiso Apk-gu wuxuu u sahli doonaa adeegsadaha inuu abuuro fiidiyooyo yar-yar oo galaya miirayaasha kala duwan oo ay ku wadaagi doonaan kooxo kala duwan iyo koontoro.
Xitaa kaaliyayaasha warbaahinta bulshada ee kaladuwan ayaa lagu soo daro gudaha barnaamijka si loogu sheego abuuraha inuu ogaado tirada wadaaga iyo waxyaabaha jecel. Iyada oo ay ugu wacan tahay qaabkeeda gaarka ah iyo dhaqdhaqaaqa, kulankan fiidiyowga gaaban wuxuu mar kale caan ku yahay dadka isticmaala muddo gaaban gudaheeda.
Ujeedada ugu weyn ee bixinta Apk waa in la bixiyo fursad lagu isticmaalo barnaamijyada kale ee aan ahayn TikTok. Haddii aad raadinayso bedel kale oo TikTok ah waxaan kugula talineynaa inaad ku rakibto Apk gudaha mobiilkaaga. Waxaan dammaanad qaadaynaa inaysan niyad jabin doonin.
magaca App.Xiaomi.Com Tiktok Tifatiraha
Magaca Xidhmada com.ss.android.ugc.aweme
Loobaahanyahay Android 4.1 iyo Plus
Qeybta xiisaha badan ee ku saabsan barnaamijkaan waa waxaad arki kartaa oo aad la kulmi kartaa super-ka aad ugu jeceshahay ka dib marka ay xisaabaadkooda galaan. Haa, waad maqashay si sax ah, superstars-ka waxay ka shaqeeyaan warshaddo kala duwan oo filim sidoo kale adeegsanaya kulankaan si ay ugu raaxeystaan ​​taageerayaashooda waqtigooda.
App-ka ayaa bilaash u ah inuu soo dejiyo oo ku rakibo taleefannada casriga ah. Haddii aad raadineyso meel aad ku sheegi karto kartidaada oo ah qaab xirmo gaaban. Waxa ka badan kan Apk-ka ayaa kaamil ah, kaliya dhagsii batoonka soo degsiga oo ku muuji kartidaada adduunka oo dhan.
Isticmaalayaasha noocan oo kale ah ee kartida leh ee aamminsan xirfadooda ayaa ah mid qaas ah oo soo jiidasho leh isaga / iyada waxay u oggolaan kartaa dadka kale inay ogaadaan ku saabsan xirfadda duubista fiidiyowyo yar-yar.
Daawadayaasha waxay baran karaan xirfadaha laxiriira qeybaha kaladuwan iyagoo daawanaya cajaladaha fiidiyowga gaagaaban.
Super Stars waxay ka tirsan tahay warshadaha filimka ee kaladuwan sidoo kale waa la heli karaa si loo raaco.
Xitaa daawadayaasha ayaa daawan kara lana socon kara qeybaha kala duwan. Haddii isagu / iyadu ay jecel yihiin heesaha waxay u baahan yihiin inay raacaan qaybta muusikada. Qaybta muusikada waxaa ka mid ah opera, classic, dhagaxa iyo muusikada aasaasiga ah.
Nidaamka soo dejinta ayaa ah mid fudud oo si fudud loo qaban karo. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa uun dhagsii badhanka isku-xirista soo degsashadaada oo si otomaatig ah ayey u bilaaban doontaa. Waxaan hubineynaa inaan bixino xariirka ugu dambeeyay ee soo degsashada ee App.Xiaomi.Com Tiktok Editor gudaha maqaalka.
Markaad dhameyso soo dejinta tallaabada xigta waa rakibaadda iyo ka faa’iideysiga Apk. In kasta oo ay fududahay, kaalmaynta isticmaaleha ayaannu ku bixinnay tallaabo kasta halkan.
Marka hore, u gudub qeybta taleefannada mobilada oo ka hel faylka Apk ka soo dejiso Faylka.
Guji Apk si aad u bilowdo nidaamka rakibaadda.
Mar haddii si buuxda loogu rakibo, u gudub menu-ka moobiilka oo guji badhanka Appka.
Furitaanka app-ka kadib, waxaad fursad u helaysaa waxyaabo madadaalo aan xad lahayn oo bilaash ah.
Waxaad kaloo isku dayi kartaa Tiktok Beddelka soo socda.
Waxaan aaminsanahay ilaa iyo hadda tani inay tahay bedelka ugu wanaagsan ee TikTok. Isticmaalayaasha Android waxay halkan kaga soo dejisan karaan bilaash. Inta aad soo dejisanayso ama aad isticmaaleyneyso Apk, haddii aad la kulanto wax dhibaato ah xor u noqo inaad nala soo xiriirto. Kooxdayada khibradda leh ayaa kula soo xiriiri doona isla marka aannu helno weydiimahaaga.
Hada La Wadaag
Guji si aad u wadaagaan on LinkedIn (ka furmay new window)
Guji si aad ula wadaagtid WhatsApp (Furan daaqad cusub)
Guji si aad u wadaagaan on Tumblr (ka furmay new window)
Guji si aad ula wadaagto jeebka (wuxuu furaa daaqad cusub)
Guji si aad u wadaagaan on Pinterest (ka furmay new window)
Guji si aad u wadaagaan on Reddit (ka furmay new window)
App.Xiaomi.Com Tiktok Tifatiraha
App.Xiaomi.Com Tiktok Tafatiraha Apk
App.Xiaomi.Com Tiktok Tafatiraha App
Khariidado & Navigation Free APP (1)
Safarka & Local (6)
Ciyaartoyda Video & Editors (20)
Cuntada & Cab (2)
Ciyaar Casual Bilaash ah (1)
Ciyaaraha Advent Free (1)
Doorka Doorka (7)
Apps jabsiga (26)
Wararka & Wargeysyada (4)
wax soo saarka (17)
casriga ah (18)
Barnaamijka Bulshada ee Bilaashka ah (1)
Baakada WIFI (4)
Copyright © 2020 RoidHub - Dukaanka Sare ee Qiimeeyay Android Store